Duuliye Khatar Galiyey Dayaaraddii Uu Waday Ka Dib Markii Uu Sigaar Ku Dhex Cabay – somalilandtoday.com
Duuliye Khatar Galiyey Dayaaraddii Uu Waday Ka Dib Markii Uu Sigaar Ku Dhex Cabay
(SLT-Hong Kong)-Duuliyaha labaad ee dayaarad ay leedahay shirkadda Air China ayaa sababay in dayaaraddu ay si degdeg ah hoos ugu soo dhaadhacdo sida ay baarayaashu sheegeen.
Lahaanshaha sawirkaWEIBOImage captionRakaabkii oo dusha uu kaga soo dhacay qalabka lagu neefsado
Haddii dayaaradda uu ku yaraado cadaadiska hawada ee gudaha dayaaradda, duuliyeyaashu waxay degdeg ugu dhaadhacaan joog hoose.
Markii la ogaaday in mushkiladdu tahay mukayifka, ee dib loo shiday, ayey dayaaraddu jooggii caadiga ahaa dib ugu laabatay.
Maamulayaasha ayaa la sheegay inay “si faahfaahsan” u baarayaan qalabka uruuriya xogta dayaaradda, iyo kan duuba wax ka dhacaya halka dayaaradda laga hago, si si sax ah loogu ogaado sababta dhalisay shilka.
Maamulka dayaaradda wuxuu ballanqaaday inaysan dulqaad u yeelan doonin wixii dhaqan xumo ah ee lagu helo shaqaalaha.
Xeerarka duullimaadyada ee Shiinaha ayaa ka mamnuucaya wixii ka billowda 2006 shaqaalaha diyaaradaha iyo rakaabka inay sigaar ku dhex cabaan, waxayna kaloo mamnuucayaan in la istcimaalo xataa sigaarka elektroonigga ah.
Laakinse sidaasoo ay tahay waxaa jiray eedaymo la xiriiray in duuliyeyaal ay sigaar ku dhex cabeen duullimaadyo dayaarado shiinaha laga leeyahay.